Dataset များ (1070)
ကမ္ဘောဒီးယား (5733) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (2717) မြန်မာ (2509) ဗီယက်နမ် (1806) ထိုင််း (1416) တရုတ် (452) အင်ဒိုနီးရှား (267) ဖိလစ်ပိုင် (267) မလေးရှား (260) စင်္ကာပူ (237) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (234) တီမော လက်စ်တေ (157) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (146) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (145) အိနိ္ဒယ (137) Global (134) ဂျပန် (126) သီရိလင်္ကာ (125) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (120) မွန်ဂိုးလီးယား (120) ဟောင်ကောင် (118) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (115) မဲခေါင် (30) Asia-Pacific (18) အာရှ (17) အရှေ့တောင်အာရှ (14) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (8) နီပေါ (8) ဘူတန် (7) မေ်ာလ်ဒိဗိ (7) ဩစတေးလျ (6) ကွတ်ကျွန်း (6) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (6) ကီရီဘာတီ (6) မာရှယ်ကျွန်း (6) နယူးဇီလန် (6) ပလော (6) ထွန်းဂ (6) ဆာမိုအာ (6) အာဖဂန်နစ္စတန် (5) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (5) ဂူအန် (5) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (5) ကီဂျစ်စတန် (5) ကာဇက်စ်တန် (5) မကာအို (5) မြောက်မာရီယားနား (5) နော််ရူး (5) နိယူအဲ (5) ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (5)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (6548) ခမာဘာသာစကား (3186) ဗမာဘာသာစကား (1052) လာအို (648) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (616) ထိုင်း (166) တရုတ် (9) ပြင်သစ် (4) English (2) အင်ဒိုနီးရှား (2) ဂျပန် (1) Karen (1) ကိုရီးယား (1)
ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (1120) မြေယာ (1024) အစိုးရ (639) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (616) မြေယာအမျိုးအစားများ (559) စီးပွါးဖြစ် မြေယာလု... (547) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွ... (490) လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်း... (487) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (455) ဥပဒေနှင့် တရားစီရင်ရေး (447) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (441) ပြည်သူပိုင် မြေငှါး... (435) အစိုးရပိုင်မြေ (431) လူဦးရေ (425) အုပ်ချုပ်ရေး (419) ဥပဒေရေးရာမူဘောင်များ (417) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (404) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (394) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (378) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (375) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (307) နိုင်ငံခြားသား ရင်း... (304) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (301) ကပ်ရောဂါ (279) သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှ... (272) အစိုးရစနစ် (270) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (256) သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်... (255) စိုက်ပျိုးရေး (253) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (244) Sustainable develop... (237) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (236) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (227) ရပ်ရွာလူထုပိုင် သစ်တော (223) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (212) သစ်တောများ နှင့် သစ... (206) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (200) နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ... (199) ရေအရင်းအမြစ်များ (199) ကုန်သွယ်ရေး (186) ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ (179) ပြည်သူပိုင်မြေ (179) ရွေးကောက်ပွဲများ (178) လူ့အခွင့်အရေး (173) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (171) အခြေခံအဆောက်အဦများ (149) အလုပ်သမား (149) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်... (147) မြေယာနှင့်ဆိုင်သော ... (146) ဇီဝမျိုးကွဲများ (144)
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 23 ဇွန် ရင်းမြစ်: The data is derived from... ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 16 ဇွန် ရင်းမြစ်: Council for the Development of Cambodia (CDC): Royal Gazette of... စိုက်ပျိုးရေး စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, ပြည်တွင်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, သစ်တောလုပ်ငန်း, အဓိက ကုမ္ပဏီများနှင့် စီမံကိန်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 1 ဇွန် ရင်းမြစ်: Royal Gazettes of Cambodia ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
ကမ္ဘောဒီးယား 109 Sub-decree 2015၊ 19 ဩဂုတ် ဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် အခြားနိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းများ, အစိုးရ
This sub-decree aims to determine the Ministry of Interior's role, duties, and structure. The goal is to define the jurisdiction of the Ministry of Interior. Applicable to...
ကမ္ဘောဒီးယား 159 ကြေညာချက် 2014၊3အောက်တိုဘာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ, အင်တာနက်, ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား 34 Sub-decree 2022၊ 14 ဖေဖော်ဝါရီ အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
Sunying Pal and Paper Environmental Technology SEZ is located in Changhaon village, Preaek Tnoat Sangkat, Bokor Municipality in Kampot province. This SEZ hasatotal land area...
ကမ္ဘောဒီးယား 36 Sub-decree 2022၊ 16 ဖေဖော်ဝါရီ အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
Kampong Seila SEZ is located in Veal village, Kampong Seila commune, Kampong Seila district in Preah Sihanouk province. This SEZ hasatotal land area of 748654 square meters....
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 16 ဇွန် ရင်းမြစ်: Royal gazette: sub-decree and decisions (2006-2020). Council for... အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content OpenCorporates နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
Webpage capture on the company profile page of Union Development Group Co., Ltd. shows detailed information of company name, status, incorporation date, company type,...
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content Khmer Times staff, Khmer Times 2021 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အခြေခံအဆောက်အဦများ
Invested in by China Road and Bridge Corp (CRBC), the $2 billion expressway will connect the capital city of Phnom Penh and the deep-sea port province of Preah Sihanouk in the...
Webpage capture on the company profile page of Prince Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. shows detailed information of company name, status, incorporation date, company...
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 13 ဇွန် ရင်းမြစ်: NCDD Gazetteer database online:... ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအစိုးရများ, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား 2022၊ 15 ဇွန် ရင်းမြစ်: National Election Committee (NEC) ရွေးကောက်ပွဲများ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content Phnom Penh Post 2017 အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content Zhongqi Oversea Group 2018 အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
Webpage capture on the company profile page of Cambodian Kratié Special Economic Zone shows detailed information of company name, status, incorporation date, company type,...
ကမ္ဘောဒီးယား Advocacy and promotional materials National Election Committee (NEC) 2022 ရွေးကောက်ပွဲများ
This data table is downloaded from the official website of the National Election Committee, which describes the number of people who went to vote for the 5th mandate Commune /...
ကမ္ဘောဒီးယား Conference/workshop proceedings and presentations Royal Group အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
Presentation on the company profile of Royal Group Poipet PP SEZ shows detailed information of company name, status, incorporation date, company type, jurisdiction, registered...
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
Webpage capture on the article of Stung Tatai Leu hydropower project, Cambodia shows detailed information of 150MW hydropower project, being developed and owned by China...
Webpage capture on the article of Stung Chea Areng hydroelectric dam in Koh Kong, Cambodia shows detailed information about the project, location, investment amount, and...